Online Gender based violence | Digital Tea House
အထွေထွေဆောင်းပါး	(	တစ်ခွက် )
Gender based violence ဆိုတာဘာလဲ?
ရှေးရိုးစွဲအယူအဆများ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ၊ အကြမ်းဖက်ခံရမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကျား/မအခြေပြုခွဲခြားဆက်ဆံသည့်၊ အကြမ်းဖက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို Gender based violence ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ ကျား/မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုသည် လူတစ်ဉီးချင်းစီကဖြစ်စေ၊ လူအုပ်စုကဖြစ်စေ မိမိနားလည်ထားသောပုံစံရှိသည့် လိင်နှင့်လူမှုရေးလွှမ်းမိုးမှုများအရ များသောအားဖြင့် မိမိတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များအား အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်မရွေး အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများနှင့် မည်သည့်လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုရှိသူများ အားလုံးသည် Gender based violence ပြုလုပ်ခံရသူများတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။
Online Gender based violence ဆိုတာဘာလဲ?
Online Gender based violence ဆိုသည်မှာ နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမီဒီယာများ မှတစ်ဆင့် ကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများကို ဆိုလိုသည်။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်း အစရှိသည့် အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များ ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများတွင် များသောအားဖြင့် မလိုလားအပ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှတ်ချက်များ ပြုခြင်း၊ မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ အလိုမတူသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရှက်ခွဲမှုများနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။
Types of online gender based violence Domestic violence
Types of online gender based violence Domestic violence လို့ခေါ်ဝေါ်သည့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် Cyberstalking လို့သိရှိထားကြသည့် အင်တာနက်ပေါ်မှ နောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်းတို့ဟာ ကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူများ၏ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အကြမ်းဖက်သော နည်းလမ်းအမျိုးအစားများ ဖြစ်သည်။ ထိုကျူးလွန်သူများသည် ရင်းနှီးသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဒေတာအချက်အလက်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုကာ ငွေကြေးရှာဖွေခြင်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ရည်ရွယ်သော အကြမ်းဖက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထိုသို့သော အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်မှုများကို ဆက်သွယ်ရေး ဉပဒေများ၊ အီလက်ထရောနစ် ဉပဒေများဖြင့် တိုင်တန်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြသော်လည်း မိမိ၏ဒေတာအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် မလွယ်ကူနိုင်ပေ။
Online Gender based violence ကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့် အကြံပြုချက်တွေက ဘာ ဖြစ်မလဲ? ကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်စဉ်များတွင် အများအားဖြင့် မီဒီယာကို အသုံးပြုကြသောသူများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိပညာ မကြွယ်ဝသဖြင့် ခိုးယူခံလိုက်ရသော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို အမုန်းစကားများဖြင့် မျှဝေခံရခြင်း၊ လိင်မှုရေးရာနှင့်ပတ်သက်သော ဓာတ်ပုံများ၊ စာသားများကို အသုံးချခံရကာ အကြမ်းဖက်မှုများ ကြုံရခြင်းနှင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုကို လှောင်ပြောင်သရော်ခံရခြင်း အစရှိသော ဖြစ်စဉ်များမှာ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အွန်လိုင်းမီဒီယာများ မှတစ်ဆင့် ကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများကို အများဆုံးခံစားရသော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအား ဒစ်ဂျစ်တယ် လုံခြုံရေးအသိပညာများ မျှဝေပေးခြင်း၊ ကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု အကြောင်းအရာများအား ပြော ပြပေးခြင်း ၊ နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သော ဉပဒေများအား သိရှိစေရန် ကူညီပေးခြင်း၊အွန်လိုင်း ကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများ ကြုံတွေ့လာလျှင် အကူအညီရယူနိုင်သော နေရာများထားရှိပေးခြင်းနှင့် ကျူးလွန်သူများအား အရေးယူ အပြစ်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ထိရောက်သော ကာကွယ်နည်းများဖြစ်နိုင်သည်ဟု စစ်တမ်းများ၏ ပြောစကားများမှတစ်ဆင့် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ (ဤစာပိုဒ်အတွက်ကိုးကားစာ- www.ids.ac.uk )